Ma habboon tahay inaad iibsato adeegyada SEO online?
SEO ama raadinta gawaarida raadinta waxaa loo isticmaalaa mulkiilayaasha bogagga si ay u hagaajiyaan darajooyinkooda raadinta internetka oo ay soo jiidaan taraafikada la beegsanayo boggooda internetka. Hay'ad SEO ah ayaa loo baahan yahay si ay u sameeyaan shaqo ballaadhan oo ballaadhan goobta. Waxaa jira dhowr bixiyeyaasha adeegyada xirfad-bixineed oo xirfadeysan oo laga heli karo suuq dijitaal ah.
Waa mid waxtar badan in lagu iibsado adeegyo SEO ah oo ka badan inta uu shaqaaleysiiyo la-taliyayaasha SEO-ga sida ay u qaban doonaan isla shaqada sicirka qiimaha jaban. Haddii aad raadineysid adeegyada adeegsigalinta laqalabeeyay, shirkad SEO ah ayaa u baahnaan doonta marka hore si loo qiimeeyo website-kaaga oo aad sameyso cilmi baaris heer sare ah - gazco co. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay ganacsade yaryar, adeegga SEO-ka ee horay loo soo diyaariyey ayaa noqon kara mid ku filan. Waxaad awoodi kartaa inaad ku dalbato adeegyadeynta adeegsiga internetka markaad u baahatid in aad sameysid qaybo yar oo SEO ah oo ku yaal goobtaada.
Waa haboon in la yiraahdo adeegyada adeegsigga ah ee wax ku ool ah ma aha had iyo jeer tayada liita. Waxay noqon karaan tayada iyo kharashka. Waa caqiido caadi ah in aan sidoo kale qayb ahaan wadaagno SEO ee la awoodi karo ma noqon karo tayada. Si kastaba ha ahaatee, laba jeer marna waa isku mid. Maalmahan, waxaa jira shirkado badan oo xirfad leh oo ka socda Bariga Yurub kuwaas oo bixiya adeegyo kharash yar oo tayo leh.
Siciradoodu waxay u muuqdaan kuwo qiimo u leh Maraykanka sida wadamadu waxay leeyihiin heerar kala duwan oo nolosha ah iyo kharashka dambe ee kala duwan. Waa fikrad qaldan in shirkadahaasi ay bixiyaan adeegyo si ay u helaan lacag. Inta badan hay'adaha wax soo saarka bariga yurub waxay leeyihiin hab culus ganacsiyada macaamiishooda waxayna bixiyaan adeegyo fara badan oo waxtar ah oo laga bilaabo baqaarada caadiga ah ee SEO iyo dhammaystirka horumarinta webka iyo adeegyada SMM.
Sidaa darteed, haddii aad jeclaan lahayd inaad hesho adeegyo tayo qiimo macquul ah, waxaad u baahan tahay inaad joojiso fekerka ah in adeegyadda wax-qabadka la awoodi karo ayan qiimo lahayn oo aan la mid noqon karin kuwa ugu sarreeya. Halkii laga rabi lahaa, waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto fekerka ah in shirkad-raadin raadin kharash-raadin ah oo raba inuu helo macaamiisha badan oo nooc ka duwan. Waxay doonayaan in ay iskaashi la yeeshaan hogaamiyaasha ganacsi weyn laakiin sidoo kale leh ganacsade maxalli ah oo yaryar. Siyaasadda binta la awoodi karo iyaga u saamaxaaya in ay xiriir daacad la macaamiishooda iyo adeegtaa sida horumarinta wanaagsan hay'adda SEO ay.
Si kastaba ha noqotee, si aad u hesho adeegsiyada wax-ku-oolka ah ee laga helo shirkad kasta oo SEO ah maaha waxaad u baahan tahay. Waxaad u baahan tahay inaad sameyso baaritaan taxadar leh oo ku saabsan suuq-geynta adeegsashada si aad u heshid kala duwanaansho suurtagal ah.
Noocyada aad u baahan tahay inaad dareenka qaadatid intaad raadineyso wakaalad dejinta iyadoon ka mid ah:
waqti shirkad ka jirta suuqa;
marqaatifurin wanaagsan oo ku saabsan hay'addan dejinta;
adeegyo kala duwan oo shirkadan bixiya;
sida qiimaha celceliska ay ka duwan yihiin qiimaha celceliska suuqa;
inta xubin shaqaale ah ee shirkadan ay leeyihiin;
manaafacaadka mashaariicda la qabtay;
oo ku saabsan ganacsigaaga;
marxaladda koowaad ee hanaanka u-habeynta;
tayada adeegyada taageerada.
Hadda, waxaa jira shirkado badan oo soo-saarka iyo la-taliyeyaal khaas ah kuwaas oo bixiya adeegyo sicir macquul ah. Si kastaba ha ahaatee, meelo badan oo ka mid ah shirkadahan waxay ku siin karaan qiime ugu sarreeya. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad u tixgeliso arrintan xannaano gaar ah.